Fampakaram-bady any amin’ny helo | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Avy Septambra 23, 2017 May 21, 2018
Noho ny maha zava-dehibe sy maika ny votoatin’ny boky ity kosa dia nanapa-kevitra ny hanao fanitsiana, famoahana sy ny tanteraka maimaim-poana ao amin’ny bilaogy.
Dia hiresaka izany dia manasongadina fa ny fiainana ny olombelona tao anatin’ny taona vitsivitsy.
Afaka mahita fa ny tsy fandriampahalemana rehetra efa lasa ny vahoaka eran-tany isan’andro. Ady, herisetra, loza, areti-mifindra, mosary, fahaverezan’ny soatoavina, ary ny zava-tsarotra tsy ampoizina na napetraka amin’ny firenena rehetra amin’ny tany.
Bad napetraka ny toe-javatra izy ireo no nahatonga izany loza rehetra? Hanasongadinana aho izay ao amin’ny maizina ny feon’ny fieritreretana, ka izay rehetra mahatakatra fa ny anton’ny misy amin’ny fiarovana ireny zava-manahirana rehetra.
Nanome toky sahady fa ny fiainana ny olombelona tsy ho ela dia mifamadika inona. Izany dia azo antoka ary ny ho hitantsika ao amin’ny boky Inona no antony sy ny vokany, ary koa inona no safidy natao ho an’ny olombelona.
Isan-andro izay mandalo, ny haino aman-jery teny fikasana ho amin’izao tontolo izao ny nofy sy ny tontolo tsara kokoa mandritra ny taona maro ho avy. Fa hitantsika fa ny fiainana dia mitondra antsika tsy ampoizina sy ny fahoriana isan’andro.
Manasa anareo aho mba hahazo ny sisa amin’ny boky amin’ny alalan’ny rohy ity izay hitarika anao eo an-kavanan’ny pejy ny bilaogy amin’ny teny Frantsay. Afaka nandika ny boky ny tranonkala ny mpandika teny pejy ny Internet Explorer « Crome » na raha tsy izany.